သင့်အခွင့်အရေးများ | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
သငျသညျအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်. သငျသညျအမရေိကနျပွညျထောငျစုအစိုးရအနေဖြင့်ရှိသည်နှင့်မည်ကဲ့သို့သင့်ရဲ့ဥပဒေရေးရာအခွင့်အရေးများနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
United States ကိုသင့်မိသားစုကိုယူခဲ့ (မိသားစုပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး)
အဆိုပါအမေရိကန်အစိုးရကဒုက္ခသည်တွေကိုအမေရိကန်သူတို့နှင့်အတူတိုက်ရိုက်လာရန်သူတို့၏လင်ယောက်ျား / ဇနီးနှင့်သားသမီးတို့အဘို့မေးမြန်းဖို့ခွင့်ပြုတဲ့အစီအစဉ်မိသားစုပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်. သငျသညျဒုက္ခသည်တစ်ဦးအဖြစ်အမေရိကန်တွင်နေထိုင်၏နှစ်နှစ်သို့မဟုတ်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ကိုလက်ခံ၏နှစ်နှစ်အတွင်းကဒီအစီအစဉ်အတွက်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
သင်တစ်ဦးနိုင်ငံသားမဟုတ်ရင်တောင်, သင်နှင့်သင့်မိသားစုကိုကာကွယ်ရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဥပဒေရေးရာအခွင့်အရေးများရှိသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
တစ်နှစ်အမေရိကန်တွင်နေထိုင်ပြီးနောက်, သင်တစ်ဦးအမြဲတမ်းနေထိုင်သူဖြစ်လာရန်သို့မဟုတ်သင့်စိမ်းလန်းသော card ကိုရရှိရန်လျှောက်ထားရပါမည်. သင့်ရဲ့အစိမ်းရောင်ကဒ်သင်သည်အသက်ရှင်နှင့်အမေရိကန်အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ဖတ်ရန်
ဒုက္ခသည်တစ်ဦးအဖြစ်, သငျသညျ US မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုသွားလာနိုင်ပါတယ်. သို့သော်, သငျသညျကိုအမေရိကန်ပြင်ပတွင်သွားလာရန်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်, သငျသညျအထူးခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပုံစံများကိုဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
တစ်ခုကကြေငြာချက်ဒုက္ခသည်အရေအတွက်က US မှာလာရန်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည် 2019 ဖြစ် 30,000. ဒီနေရာတွင်ကဒီမှာပြီးသားကြောင်းဒုက္ခသည်တစ်ဦးလျှင်သင်သိရှိရမည်သုံးအရာဖြစ်ကြ၏ ဆက်ဖတ်ရန်
လွတ်လပ်ခွင့်အားကြာမြင့်စွာလမ်းလျှောက်: Dadaab ဒုက္ခသည်စခန်းကနေမင်နီဆိုတာမှလွတ်လပ်ခွင့်အားကြာမြင့်စွာလမ်းလျှောက်: dadaab ဒုက္ခသည်စခန်းကနေမင်နီဆိုတာမှ. တစ်ဦးကဒုက္ခသည် Dadaab နေသူ့ခရီးကိုရောင်ပြန်ဟပ်, ကင်ညာမှာတည်ရှိပါတယ်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဒုက္ခသည်စခန်း